Ingaba RFID Technology Ukufumana Private?
Ngelishwa, akukho rhoqo kwi iinkqubo apho abathengi ukuba bakrotyiswe. Nabani na scanner exhotyiswe ngokufanelekileyo kunye nokufikelela kufutshane isixhobo RFID ungayenza naphi na kwaye ufunde imixholo yawo. Ngokucacileyo, ezinye kuyakhathaza kwiZwekazi kunokuba kunjalo kunezinye. Ukuba umntu uthi ahambe ibhegi yakho incwadi ...
Indlela Works RFID
RFID ayikho Radio-frequency identification. Le ungayiqondiyo ibhekisa kwizixhobo ze-elektroniki amancinci ezinama a chip encinane kunye eriyali. Nj ngokuqhelekileyo ikwazi ukuthwala bytes 2,000 ze data okanye ngaphantsi. Icebo RFID ubeka injongo efanayo ikhowudi bar okanye zinomtya ngemagnethi ngasemva ...